Himalaya Dainik » भगवान श्रीकृष्ण गाई, मयूरको प्वाँख र बाँसुरीको सन्निकटमा रहनुको रहस्य यस्तो छ !
भगवान श्रीकृष्ण द्वापरयुगका भगवान् हुन् । श्रीकृष्णलाई केही वस्तुहरु निकै प्यारा थिए । जुन वस्तुहरुबाट उनी कहिल्यै टाढा रहेनन् । भगवान श्रीकृष्णका लागि अत्यन्तै मनपर्ने वस्तुहरुमा गाई, मख्खन, मयूरको प्वाँख र बाँसुरी हुन् । आखिर भगवान श्रीकृष्णलाई यी चिज किन प्यारो भए त ?
भगवान श्रीकृष्णलाई बाँसुरी अत्यन्तै प्रिय छ । किनकी बाँसुरीमा तीन गुणहरु हुन्छन् । पहिलो बाँसुरी भित्र आँख्ला हुँदैन जसले संकेत गर्छ आफुभित्र कुनै गाठो वा आँख्ला झै भाव नराख्नुहोस् ।
भगवान श्रीकृष्णलाई गाई पनि अत्यन्तै मनपर्ने जनावर थियो । यसको कारण यो हो कि गाई सबै कार्यका लागी उदार तथा समस्त गुणयुक्त मानिन्छ । गाईको गहुँत, गोबर, दूध, दही र घ्युलाई पञ्चगव्य मानिन्छ । मान्यता अनुसार यी वस्तुको सेवन गर्नाले शरीरको भित्र कुनै पनि पाप रहँदैन ।
भगवान् श्रीकृष्णको टाउकोमा मयूरको प्वाँख सधैँ हुन्थ्यो । मयूरलाई चिर ब्रह्मचर्य युक्त प्राणी मानिन्छ । प्रेममा सदैव ब्रह्मचर्ययुक्त महान् भावनालाई समाहित गर्ने प्रतिकका रुपमा श्रीकृष्ण मयूरको प्वाँख धारण गर्ने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
श्रीकृष्णलाई मख्खन र मिश्री अति प्रिय लाग्दथ्यो । मिश्रीको स्वाद मख्खनमा मिलाएपछि मख्खनको मिठास अझ बढ्दछ । मख्खन आफैमा पनि स्वाद र पोषणयुक्त हुन्छ जसलाई मिश्रीले झन् मिठासपूर्ण बनाउने गर्दछ ।
मिश्री मख्खनको कणकणमा घोलिएर मख्खनको प्रत्येक हिस्सालाई अमृत समान स्वादिलो बनाउँछ । मिश्रीयुक्त मख्खनले जीवन र व्यवहारमा प्रेमलाई अपनाउनु पर्ने सन्देश दिने गर्दछ । त्यसैले भगवान् श्रीकृष्णलाई मख्खर र मिश्री निकै प्रिय रहने गरेको शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति २४ जेष्ठ २०७७, शनिबार २१:४४